Kufsi | February 2020
Qaabdhismeedka qaliinka maskaxda
Sidee loo sameeyaa qalabka kuleylaha ee qaboojiyaha? Fiidiyowga tababbarka
Nafaqeynta digaaga waa hawl aad u xiiso badan. Isku-dhafka gacmo-dhaqashada ayaa ah mid aad u faa'iido leh oo weliba dhaqaale ahaan. Qalabka foosha ee lagu soo saaro warshado gaar ah waa raaxo qaali ah, kuwa doonaya inay digaagaan inta badan ma awoodaan inay iibsadaan qalabkan.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta thayooriyaha Blitz, tilmaamaha isticmaalka qalabka
Maanta, beeralayda gaarka ah ee daaqsinta, doorashooyinka khibrad wanaagsan oo lagu kalsoon yahay waa dhibaato weyn. Marka la eego in beeraleydu halis galiso maalgashadeeda, waxa uu rabo inuu helo mashiinka tayada iyo tayada la awoodi karo waa la fahmi karo. Maantana waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah qalabkaas - Blitz 72 thong incubator.
Ovoskop: sida loo habeeyo ukunta
Baaritaanka ukumaha, labadaba ka hor inta aan la furin iyo inta lagu guda jiro, waa talaabooyin muhiim ah oo ku saabsan taranta taranka. Kaaliyaha wanaagsan ee arrintani waa baako - qalab kaas oo suurtogal u ah in lagu aqoonsado cilladaha, cilladaha aan caadiga ahayn, ama la socdo horumarka saxda ah ee embriyaha. Waa maxay baakteeriyada? Ovoskop waa qalab gaar ah oo gacan ka geysanaya xakamaynta bayoolojiga ee tayada qalabka buuxinta.
Miyaa suurtagal in la sameeyo heer-kuleylka laf-dhabarta ee loo yaqaan "thubostat"
Horumarinta guusha ee ukunta ayaa noqon karta mid aan suurtogal ahayn haddii aysan jirin xaalado heerkulka oo deggan. Nidaamkan waxaa bixiya heerkul caadi ah oo loogu talagalay kiniiniga, kaasoo haynaya heerkul ah ± 0.1 ° C, halka ay u kala duwanaan karto heerkulku inta u dhaxaysa 35 ilaa 39 ° C. Shuruudahan oo kale waxay ku jiraan aalado badan oo dijital ah iyo qalabka analogga ah.
Sida loo doorto heerkulbeegga kuleyliyaha, noocyada waaweyn iyo qaababka caanka ah ee qalabka
Mid ka mid ah hababka beeraha ugu caansan maanta waa beerashada digaaga. Tani waxay sabab u tahay joogitaanka goobta ugu yar ee bilaashka ah iyo kharashka ku baxa kharashka. Gaar ahaan khuseeya waa saarista chicks iyo fulintooda kale. Tan waxaa lagu sameyn karaa xitaa aqalka iyadoo la isticmaalayo kuleelo caadi ah oo leh heerkulbeeg.
Miyuu qiimeeynayaa digaagga clamel-kiciyeyaasha?
Way adag tahay beeralayda casriga ah ee ku lug leh shimbiraha shimbiraha si ay u sameeyaan mashiinka mucjiso sida naqshad. Kobcinta waa mashiinka la awoodi karo oo la isku hallayn karo oo kuu oggolaanaya inaad kor u qaado tirada saamiyada dhalinyarada ah ee aad ka filaneyso, iyadoon loo eegin xilliga xiga. Suuqa casriga ah waxaa jira tiro badan oo moodhiyaal ah, awoodda kala duwan, shaqeynta iyo qiimaha.
Waxaan ku koraan digaagga ee kobcinta
Ukunta ukunta digaaga ee guriga waa mid aad u xiiso badan, laakiin waa dhibaato. Si aad u hesho caafimaad qabta, qalafsanaan, caruur macaan leh waqtigii loogu talagalay, waa inaad si adag u raacdaa xeerar dhowr ah oo aad ka heli doonto maqaalkeena. Waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonaa dhammaan habka qashin-qubka, iyada oo laga bilaabo xulashada iyo soo-gelinta walaxda qalabka, oo ay ku dhammaato dhalashada guurka ah ee shimbiraha yar yar.
Sida loo doorto kiniin loogu talagalay ukumaha: sifooyinka ugu fiican
Horumarinta farsamada weli ma joogsanayn, sannad walbana wax soo saarkooduna aad u sarreeya waxay u yimaadeen suuqyada. Tani waxay sidoo kale khuseysaa kulubka. Warshadaha ayaa si joogto ah u soo bandhigaan alaabta cusub, si ay u isticmaalaan macaamiisha hawlaha adag ee doorashada dooga ugu wanaagsan ee ukunta. Aynu isku dayno inaan tixgelinno faa'iidooyinka iyo khasaarta siddeed nooc ee alaabta la midka ah, kuwaas oo ah hoggaamiyeyaasha iibinta kooxahan.
Sida loo doorto aqbalida saxda ah ee guriga
Dhammaan kuwa ku fekeraya taranka qotodheer ee digaaga, ugu horreyntii waxay fiiro gaar ah siiyaan "qalabaynta". Qaadashada waa mid wanaagsan, laakin qiyaaso badan oo haboon sida habka aan habooneyn, oo aan digaag kasta u fadhiisan doonin si aamusnaan leh buulka. Xaaladahaas oo kale, cutubyo gaar ah ayaa ku habboon. Waxaynu ogaannaa sida loo doorto kuluble lagu kalsoonaan karo, oo ku saleysan sifooyinkaas.
Meelo badan oo guryaha laga isticmaalo, mid ayaa maqli kara hubbub aan kala-googoynaynin: haadi xayawaan, qufac shimbiro ah, maqaar guntan, iyo qaylo dhoobo ah. Si aan u iibsan shimbiraha yar yar gu'ga kasta, milkiiluhu wuxuu faa'iido badan u leeyahay inuu shimbirta ka qaato beerkiisa. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad iibsato qalab sida naqshadeeye. Aynu tixgelineyno kulubka "Hagaha Hagaajinta", oo ay soo saareen shirkadda Novosibirsk ee "Bagan".
Maanta, suuqyada gudaha waxay bixiyaan noocyo badan oo ah noocyo kala duwan oo isweydaaris ah, labadaba Ruush-sameynta iyo dibedda laga keeno. Shimbiraha hibada leh waa ganacsi masuul ah oo u baahan aqoon iyo qalab habboon. Maadaama beeraha digaaga badani ay yiraahdaan, midna waa inuusan ku dadaaleynin inuu iibsado iskubarro qaali ah oo qaali ah, maadaama ay jiraan waxyaabo tayo sare leh.
Kaabeeysi loogu talagalay tiro badan oo ukumo ah ayaa beerta digaaga u qaata si cusub, oo hufan, heer sare. Isticmaalka cutubyada noocan oo kale ah waxay u ogolaanayaan inaysan helin tiro badan oo digaag ah, laakiin sidoo kale waxay hubisaa in ay hagaagsan yihiin oo ay wanaagsan yihiin, taas oo ah, dakhliga xasilloon. Wakiil tayo sare leh oo wakiil ka ah noocyada qalabka sida waa "Stimul-1000".
Sida loo sameeyo kobcin ukun leh gacmahaaga
Haddii aad tahay qof milkiilaha ah, maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa diyaarinta kuleylka kuleylaha. Waxaad ka ogaan doontaa waxyaabaha ku jira kuleyliyaha kulaylka iyo nooca moodooyinka ugu waxtarka badan. Waxaan sidoo kale diiradda saari doonaa isbitaallada guriga - faahfaahin faahfaahsan oo loogu talagalay dhowr nooc ayaa la siin doonaa dareenkaaga.
Waxaad ku wareegi kartaa qalab kala duwan oo loogu talagalay kor u qaadida chicks, halka guusha guud ee ganacsiga digaaga inta badan ay ku xiran tahay natiijada baadhitaanadaas. Sidaa daraadeed, doorashada xulashada isweydaarsiga, waa inaad ku tiirsanaataa warshadaha la xaqiijiyay, kuwaas oo si fiican uga jawaaba dadka ay soo martay badeecadahooda.
Dib-u-eegista maskaxda ee ukunta "Titan"
Beeraleydu waxay lahaanayaan beer yar yar, si taxadar leh u soo dhawow xulashada hibo-baraha ee digaagga taranka. Isla markaa, fiiro gaar ah ayaa la siiyaa nidaamka kontoroolka, hawo-gelinta, awoodda iyo xuduudaha kale ee muhiimka ah ee qalabka. Hoos waxaan ka wada hadleynaa casriga casriga ah ee loogu talagalay isticmaalka guriga "Titan".
Dib-u-eegis xeeldheer loogu talagalay ukumaha "Remil 550TsD"
Kombuyuutarada "Remil 550TsD" oo muddo dheer si xoog ah ugu guuleystay suuqa suuqiisa. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa in aad isku mar noqotid tiro badan oo ah ukumaha shimbiraha. Thanks to hawlgalka lagu kalsoonaan karo ee qalabka lagu ilaalinayo cimilada gudaha, Remil 550CD waxay keenaysaa qalab ilaa 95% oo ah qiyaasta bilowga ee loogu talagalay.
Faahfaahinta qiyaasta ukunta ee ukunta "Stimul IP-16"
Waxaa jira noocyo digaag ah, sida, tusaale ahaan, quruxda quruxda badan ee Nederlandka ah ee qaboojiyay, kuwaas oo shaqeynaya haweenka uurka leh mana rabaan in ay ukumeeyaan. Digaagga kale waxay isku dayayaan inay si daacad ah u gutaan waajibaadkooda waalidnimo, laakiin duruufaha dibadeed ayaa faragelinaya. Sidaa daraadeed qofka ayaa soo bandhigay habka wakhti go'an oo sidaas awgeed si weyn u kordhiyay dadka digaaga ah, oo hadda ka badan saddex jeer tirada dadka ku nool meeraha.
Dulmar soo koobida ukumaha "IFH 1000"
Kufsi waa geedi socod kakan, guusha ay ku xirantahay arrimo badan. Beeralayda ku hawlan hirgelinta shimbiraha beeraha waxay muddo dheer ku guuleysteen qalab casri ah oo leh nidaamyo xakameyn toos ah oo ah xuduudaha ugu muhiimsan ee embriyaha. Mid ka mid ah aaladahaas - kobcinta "IFH 1000".
Faahfaahinta qiyaasta maskaxda ee ukunta ukunta 24
Kobcinta wax soo saarka shisheeye waxaa lagu kala soocaa shaqeyn wanaagsan, kulamo tayo sare leh iyo waxqabadka la isku halayn karo. Inta badan hawlaha qalabkaas oo kale ah waa kuwo ismaamul ah oo uma baahna dareen joogto ah beeralayda. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee isweydaarsiyada guryaha waa shirkadda Talyaaniga Novital.
Sida loo nadiifiyo qandhada kahor inta aan la dhigin ukumaha
Si loo helo xayawaanno da 'yaryar oo caafimaad qaba in lagu qalajiyo kuleylaha, qalabku waa inuu si habboon u diyaarsan yahay qaliinka. Marka lagu daro kuleylka, dejinta tilmaamayaasha saxda ah iyo wixii la mid ah, ka hor inta aan la isticmaalin qalabka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo jeermi-dilista. Sidee iyo waxa la nadiifin karo masraxa, ee ku xusan qodobkan.
Sida loo koro dabocase weyn, beerto iyo daryeelka daikon
Qodobbada waxtarka leh ee saxafrajka: isticmaalka daawada dhaqameed iyo ka hortagga
Nigella Damask: sharax, ku haboon iyo daryeel, sawiro
Noocyada Cyclamen: Magacyada sharaxaad iyo sawir
Waxaa dhici karta in uu jirka u geysto waxyeelo Fitamiin B6 ah ee digaagga
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ka mid ah koritaanka Beijing, xitaa xaqiiqda ah in xitaa xaaladaha qotodheerta dhexdhexaad ah mid si sahlan loo heli karo laba goor xilli kasta. Sidoo kale, kaabajkani wuxuu leeyahay tiro aad u tiro badan oo nafaqo ah, oo kaliya waa khudradda dhadhan fiican leh. Laakiin weli, dad badan ayaa wali daacad u ah kaabajka caadiga ah ee caadiga ah. Read More
Sida loo koro tufaaxa: xeerarka iyo talooyin
Qodobada halista ah ee ginger cilsan: maxay yihiin ciladaha, sida loo yareeyo saameynta taban?